Dawlada Dalka Maraykanka ayaa mar labaad ka hadashay Duqayntii Deegaanka Dhooblay | maakhir.com
Dawlada Dalka Maraykanka ayaa mar labaad ka hadashay Duqayntii Deegaanka Dhooblay
Washinton:- Dawlada Dalka Maraykan ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixisay duqayntii ay u gaysteen Deegaanka Dhooblay ee Koonfurta Dalka Somaliya, washinton waxay si cad uga hadashay inay halkaasi ku dhuumaalaysanayaan kooxo xidhiidh dhaw la leh Shabakada Al-Qaacida iyaga oo farta ku fiiqay inay sii wadayaan Duqaynta Xaga cirka ah ee ay ku wadaan Goobaha ay ku jiraan A- Qaacida.
Dawladaasi waxay sheegtay inay hawdka ku dhaw deegaanka Dhooblay ay Degan yihiin Kooxo la shaqeeya Argagixisada kuwaasi oo log wayn ku leh Amaan darada ka socoda aduunka daafihiisa siiba colaadaha ka culcaya Gees Afrika.
Warka ka soo baxay Wasaarada Gaashaandhiga ee dawladda Mareykanka ayaa lugu sheegay in ay Xukuumada Bush sii wadeyso Duqeymaha ay ku sameyneyso meel walba oo ka mid ah Aduunka ,markii la ogaado in ay joogaan Kooxo ka soo horjeeda Amaanka Aduunka ayna waajib ku tahay inay Dawlada Dalka Maraykanku beegsato si dadka looga xakameeyo khatarta waxa ay ugu yeedheen Al-Qaacida.
Af hayeen u hadlay ciidamada Dawlada Maraykan ee la dagaalama Al-Qaacida ayaa sheegay inay mar walba ka go an tahay ciidamada maraykanka inay sii laba jibaaraan ugaadhsiga Shabakada Al-Qaacida oo ay sheegeen inay wel wel buuxa ku hayaan Aduunka oo dhan.
Afhayeenkaasi waxa uu ka gaabsaday inuu til maamo kharaaha ay gaysteen duqayntaasi, mana uusan sheegin saldhiga ay ka soo duuleen Diyaaradaha Duqaynta ka gaystay Deegaanka Dhooblay ee ku yaala Cirifka Koonfureed ee Dalka Somaliya.
« Doorashooyinka Dalka Malaysia oo ay isu diyaarinayaan Shacabka Dalkaasi
Condoleezza Rice oo booqasho rasmi ah ugu boqooshay Bariga Dhexe »